Bartayaasha Luqadda Ingiriisiga (EL) - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Dugsiyada Robbinsdale Area waxay u adeegaan arday kaladuwan oo ka kala yimid dhaqamo iyo luqado kala duwan oo hodan ah. Waxaa naga go'an inaan hubinno waayo-aragnimo waxbarasho oo loo siman yahay oo ixtiraam leh arday kasta, iyadoo diiradda la saarayo xoogga la xiriira dhaqanka, isirka, luqadda koowaad, iyo asalka qaran, iyo kuwo kale.
Waxaan ka rajeyneynaa waxqabad sare oo aqooneed ardayda oo dhan. ELs, sida ardayda oo dhan, waxaa laga filayaa inay la kulmaan caqabadaha adag ee heerarka tacliinta gobolka. Ardayda EL waxay baranayaan luuqada Ingiriiska isla waqtigaas waxay baranayaan nuxurka tacliimeed waxayna horumarinayaan xirfado garasho oo buuxa. Ku guuleysiga EL waa mas'uuliyad la wadaago macallimiinta la kaashanaya qaabeynta waxbarid wax ku ool ah oo loogu talagalay horumarinta luqadda iyo akhris-qorista dhammaan qaybaha maaddooyinka. Macallimiinta iyo maamulayaashu waxay si wadajir ah uga shaqeeyaan inay waalidiinta kala qaybqaataan diyaarinta ardayda guusha iyo inay si togan wax ugu biiriyaan bulshadooda.
Heer kasta oo fasal ah, dugsiyadu waxay yeelan karaan arday leh heerar kaladuwan oo aqoonta Ingiriisiga iyo khibradaha tacliimeed. Si wax looga qabto kakanaanta baahiyahaan, RAS waxay adeegsaneysaa qaab wada shaqeyn ah oo lagu bixinayo khibrad waxbarasho oo isku xiran oo isku dhafan oo loogu talagalay ELs si loo gaaro heerarka tacliimeed. Macallimiinta EL waxay ku bartaan luqadda iyadoo la adeegsanayo nuxur ahaan, iyagoo la kaashanaya macallimiinta maaddooyinka iyo wax ka qabashada heerarka siyaabo kala duwan si loo daboolo baahiyaha ardayda. Heerarka sare ee aqoonta, ardayda waxaa la siiyaa wax-barasho illaa inta suurtagal ah.
Qaabka Waxbarida Dugsiga Hoose
Qaab-dhismeedka Dugsiga Sare
Inta badan barashada ardayda EL waxay ku dhacdaa waxbarashada guud ama fasalka maadada. Macallimiinta fasalka waxay leeyihiin mas'uuliyadda koowaad ee dhammaan ardayda, oo ay ku jiraan kuwa leh baahiyaha barashada luqadda. Si loo daboolo baahiyaha gaarka ah ee dhammaan ardayda, tilmaamahan waxaa loo isticmaali karaa in lagu horumariyo barashada habboon. Adeegyada EL ka sokow, ardayda EL waxay sidoo kale u qalmi karaan Cinwaanka I iyo adeegyada kale ee taageerada tacliinta. Adeegyo badan waa in la isku duwo si loo bixiyo taageero dhammaystiran oo si habboon wax uga qabata ardayda badan iyo kuwa kala duwan.
Wada-barista ama Ku-darista Qaabka: Meel kasta oo ay suurtagal tahay, macallinka EL wuxuu si wadajir ah wax ugu baraa fasalka guud macallinka fasalka. Macallinka EL wuxuu kabayaa barashada tacliimeed ee macallinka fasalka, isagoo siinaya ikhtiyaarro kooxaysan oo is bedbeddela si ay ardaydu u helaan koox yar ama waxbarasho shaqsiyeed. Macallinka EL wuxuu ku dadaalayaa kordhinta isdhexgalka macnaha leh ee fasalka dhexdiisa. Wada-bariddu waxay hubisaa khalkhalka ugu yar ee ardayga EL. Macallimiintu waxay manhajka fasalka u isticmaalaan inay noqdaan il-dhaqaale, iyo sidoo kale agabyada kale ee ku habboon ee taageera.
Qaabka Ka-bixida: Haddii macallinka EL-ka ay tahay inuu ardayda kala baxo fasalka waxbarashada caadiga ah, iyadu ama iyadu waxay taageeri doonaan nuxurka tacliimeed ee fasalka, iyo afarta qaybood ee luqadda - ku hadalka, dhageysiga, akhriska iyo qorista. Marka lagu daro heerarka mawduucyada gobolka iyo degmada, macallimiinta EL waxay isticmaalaan heerarka ELD ee ka socda WIDA si ay u hagaan tilmaanta.
Soogalootiga [Heerka WIDA ee 1-1.9]: Marka lagu daro adeegyada kor ku xusan, ardayda ku jirta fasalada 1-5 ee loo aqoonsaday inay yihiin kuwa cusub waxay helayaan ugu yaraan 30 daqiiqo oo dheeraad ah oo ah barashada EL. Ardayda sida caadiga ah waxaa loo kaxeeyaa qol gooni ah oo leh macallin EL oo shati u haysta adeegan. Ardaydu waxay bartaan ereyada aasaasiga ah iyo qaab dhismeedka jumlada, iyo waliba luuqada bulshada. Macalimiintu waxay hada isticmaalaan Manhajka Qaamuuska Oxford Picture iyo sidoo kale agabyada kale ee ku haboon. Waxbariddu waa inay diiradda saaraan afarta qaybood ee luqadda - kuhadlida, dhageysiga, akhriska iyo qorista. Ardayda cusub ee xanaanada caruurta waxaa laga yaabaa inay helaan 20-30 daqiiqo oo dheeri ah oo adeeg ah maalin kasta, iyadoo kuxiran guud ahaan baahida ardayda ee dhismaha.
Fasallada Isku-Waxbaridda ah (fasallada 6-12): Fasalladan waxaa qorsheeyay oo hoggaaminaya laba macallin - hal macallin aagga maadada, iyo hal macallin EL. Macallimiin badan ayaa leh PLC caadi ah oo leh aagga maaddooyinka ay wax ku bartaan. Dadaalo ayaa la sameeyay si loo siiyo lammaanaha isla wax lagu barto waqti qorsheyn guud inta lagu jiro ama ka baxsan maalinta dugsiga.
Fasallada Mawduucyada Da'da ah (fasallada 9-12): Macallimiinta mawduucyada waxay bartaa ELs oo lagu soo ururiyey aqoonta fasallada maadooyinka. Bixinta waxay ku saleysan tahay jadwalka, heerarka, iyo lambarrada ardayda. Macallimiinta wax lagu barto ee gaboodfalka ah waa inay lahaadaan tababar ku saabsan iskudhafidda maadooyinka iyo istaraatiijiyadaha helitaanka luqadda labaad.
Fasalada Istaageed Keliya EL [fasalada 6-12]: Ardayda EL waxay helaan adeegyo kaligood ah ama aqoon luqadeed ama heer darajo. Fasalladan waxaa wax ka dhiga macallimiinta EL waxayna wax ka qabtaan baahiyaha luqadeed ee gaarka ah iyada oo loo marayo heerarka heerarka fasalka ee qaybaha aasaasiga ah.
Habka Aqoonsiga EL
Qoysaska ku cusub degmada dugsiga Robbinsdale ayaa buuxiya Sahanka Luqadda Guriga ee Minnesota. Haddii Sahanka Luqadda Guriga ee Minnesota uu muujiyo in ardaygu adeegsanayo ama uu la kulmay luuqad aan ahayn Ingiriis ama luqado kala duwan oo Ingiriis ah sida Ingiriisiga Creole, Ingiriisiga Liberia, iwm. Haddii kale, natiijooyinka qiimeynta ee degmo kale waa la isticmaali karaa haddii lagu taariikheeyay sannad gudihiis.
Ardayda xanaanada waxaa lagu baarayaa WIDA MODEL.
Ardayda dhigata fasalada 1-12 waxaa laga qaadaa WIDA Screener.
Qoysaska waxaa loo gudbin karaa Xarunta Diiwaangelinta ee Xarunta Adeegga Waxbarashada si loogu baaro ardaydooda.
Nidaamka Ka Bixida EL
Si ardaygu uga baxo barnaamijka EL, ardaygu wuxuu qaadan doonaa WIDA Helitaanka ELLs 2.0 sanadkiiba. Waa inay buuxiyaan shuruudaha soo socda si ay uga baxaan barnaamijka:
Soo gal dhibco isku dhafan oo ah 4.5 ama wixii ka sareeya
Dhammaan xayndaabyada (dhageysiga, ku hadalka, akhriska, iyo qorista) ee ah 3.5 ama ka sareeya
Haddii seddex ka mid ah afarta qaybood ay yihiin 3.5 ama ka sareeya arday wuu ka bixi karaa iyadoo lagu saleynayo tixgelin dheeraad ah
Sidee degmadu u go'aamisaa haddii ardaygaygu xaq u leeyahay adeegyada Barteyaasha Ingiriisiga?
Ayaa ii soo ogeysiinaya u qalmitaanka ardaygayga ee Adeegyada Barashada Ingiriisiga?
Muxuu yahay hadafka barnaamijka Barashada Ingiriiska?
Ardaygeyga ma looga baahan yahay inuu kaqeybqaato barnaamijka Barashada Ingiriisiga?
Goorma ayuu ardaygaygu ka baxayaa adeegyada EL?
Qoysaska ardayda cusub ee diiwaangashan waxay dhammaystiri doonaan Daraasadda Luqadda Guriga ee Minnesota oo lagu daray diiwaangelinta ama foomka diiwaangelinta. Haddii sahamintu muujiso in ardaygaagu adeegsanayo ama uu la kulmay luqad aan Ingiriisiga ahayn ama luqado kala duwan oo Ingiriis ah sida Ingiriisiga Creole, Ingiriisiga Liberia, iwm. shaashadda aqoonta luqadda Ingiriisiga.
Ardayda xanaanada ayaa qaata moodeelka ardayda fasalada 1-12 waxay qaataan WIDA Screener. Natiijooyinka baaritaankaan waxay go'aaminayaan haddii ardaygaagu xaq u leeyahay taageero dheeri ah oo uu ku barto Ingiriisiga tacliinta si uu ugu guuleysto dugsiga.
Dugsiyadu waxay mas'uul ka yihiin aqoonsiga, ogeysiinta iyo qaabeynta ama gelinta ardayda barnaamij loogu talagalay barashada Ingiriisiga oo ah Luuqad Labaad (ESL). Waa laguu soo sheegi doonaa sanad walba ardaygaagu inuu u qalmo adeegyada.
Ujeeddada barnaamijku waa in laga caawiyo ardayda inay bartaan xirfadaha Ingiriisiga ee ay u baahan yihiin si ay ugu guuleystaan fasalka guud ee waxbarashada iyo inay ku aflaxaan imtixaannada looga baahan yahay gobolka si ay u qalin jabiyaan. Macallimiinta ESL waxay lashaqeeyaan macallimiinta heer-fasal ah si ay uga caawiyaan ardayda inay helaan xirfadaha dhageysiga, hadalka, akhriska, iyo qorista Ingiriisiga ee dhinacyada akhriska, xisaabta, sayniska iyo cilmiga bulshada. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad soo booqato dugsiga ardaygaaga oo aad la kulanto shaqaalaha EL si aad wax badan uga ogaato waxtarrada barnaamijka iyo adeegyada kale ee laga heli karo dugsiga.
Maya. Waad diidi kartaa adeegyada ama ardaygaaga waad kala bixi kartaa barnaamijka wakhti kasta adoo warqad u diraya dugsiga una soo diraya codsiga. Dhammaan ardayda xaq u leh adeegyada EL waxaa laga filayaa inay qaataan ACCESS for ELLs, imtixaan loogu talagalay in lagu cabbiro aqoonta luqadda Ingiriisiga ee dhageysiga, hadalka, akhriska, iyo qorista sannad kasta, ha ka qaybgalaan ama yaanay ka qayb gelin. Tani waa sababta oo ah sharciga federaalka iyo kan gobolka labaduba waxay u baahan yihiin inaan cabirno horumarka ardayda ee barashada Ingiriisiga waxayna naga caawineysaa inaan hubino guusha ilmahaaga. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad marka hore lahadasho shaqaalaha EL si aad ula wadaagto waxyaabaha aad ka walwalsan tahay maadaama aan soo dhaweyneyno jawaab celin kasta si aan si fiican ugu adeegno baahida cunugaaga.
Sannad kasta, dhammaan ardayda xaq u leh adeegyada EL, iyadoon loo eegin inay ka qaybgalaan barnaamijyada EL, waxaa laga filayaa inay qaataan ACCESS ee ELLs, imtixaan loogu talagalay in lagu cabbiro aqoonta luqadda Ingiriisiga ee dhageysiga, hadalka, akhriska iyo qorista. Iyada oo udhaxeysa dhibcaha kaladuwan ee 1.0 ilaa 6.0, aqoonta ayaa lagu qeexaa inay tahay isku-dhaf ama isku-darka dhibcaha ugu yaraan 4.5 oo leh dhibco ah 3.5 ama ka sareeya dhegeysiga, hadalka, akhriska, iyo qorista. Ardayda buuxisa shuruudaha aqoonta waxay ka bixi doonaan adeegyada EL. Haddii ardaydu ka soo bixi waayaan shuruudaha, waxay sii wadi doonaan inay xaq u yeeshaan adeegyada EL waxaadna heli doontaa ogeysiis ku saabsan adeegyada sannad kasta.